I-Santorini, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeSantorini
Bukela ividiyo mayelana neSantorini
Hlola iSantorini, igugu eliyigugu le-Aegean, empeleni eliyiqembu leziqhingi ezine-Thíra, Thirassiá, Asproníssi, Palea kanye Nea Kaméni.
Yonke inkimbinkimbi yeziqhingi zaseSantorini iseyintaba-mlilo esebenzayo futhi mhlawumbe ukuphela kwentaba-mlilo emhlabeni omgodi wayo ulwandle. Iziqhingi ezakha iSantorini zaba khona ngenxa yokuqhuma kwentaba-mlilo; kuqhuma ukuqhuma okukhulu okuyishumi nambili, eyodwa njalo ngeminyaka ye-20,000 cishe, futhi ukuqhuma ngakunye okunodlame kubangele ukuwa kwengxenye yentaba-mlilo yakha indlwana enkulu. Intaba-mlilo, nokho, ikwazile ukuziphindaphinda kaningi.
Ukuqhuma okukhulu kokugcina kwenzeka eminyakeni eyi-3,600 eyedlule (ngesikhathi se-Minoan Age). Lokhu kuqhuma kwacekela phansi impucuko yasendaweni ebiyimpumelelo, ubufakazi bokuthi butholakale ngesikhathi kuvubukulwa indawo yokuhlala e-Akrotíri. Izinto eziqinile namagesi aqhamuka engaphakathi kwentaba-mlilo adale i- "vacuum" engaphansi ngaphansi, okudala ukuwohloka kwengxenye enkulu nokwakhiwa kwe "pot" enkulu-iThailand yanamuhla-enobukhulu be-8 × 4 km kanye nokujula kufika ku-400m ngaphansi kwezinga lolwandle.
I-voldera ye-mlilo, intaba enkulu engaphansi kwamanzi eyakhiwa ukuqhuma kwekhulu le-16th BC, ibusa indawo.
Umsebenzi osanda kwenzeka wentaba-mlilo kulesi siqhingi wenzeka e-1950. Isiqhingi sonke empeleni siyimyuziyamu enkulu yemvelo / yentaba-mlilo enengqondo lapho ungabona khona uhla olubanzi lwezakhiwo namafomu ezindawo.
Naphezu kokukhula kwezokuvakasha isiqhingi esihlangabezane nakho, iSantorini, esinye seziqhingi esidume kakhulu kulezi Greece, ihlala iyindawo yokuheha enhle, oyimfihlakalo.
Ukucinga romance Santorini kubhekwa njengendawo efunwa kakhulu yindawo yokuthola uthando e-Greece, ngoba azikho izindawo eziningi emhlabeni lapho ungathokozela khona amanzi acwebile ngenkathi usendaweni yomngcele wentaba-mlilo omkhulu ophakathi nendawo ulwandle. Lesi siqhingi sinedumela elikhulayo njengendawo yomshado yemishado hhayi kusuka kuphela Greece kepha abavela emhlabeni wonke. Uhambo oluya eSantorini nolunye uhlangothi luyiphupho kunoma ngubani oke wabona okungenani isithombe esisodwa seCaldera esidumile saseCaldera nokushintshana kokuqabulana ngaphansi kwelanga elihlonishwayo leSantorini yisipiliyoni sokugcina sothando!
Hlola amadolobhana esiqhingi. IFirá inhloko-dolobha enhle yesiqhingi; sakhiwe phezulu emaphethelweni weCaldera, kubukeka njengomdwebo omangalisayo. UFirá, kanye no-Oia, Imerovígli kanye noFirostefáni abekwe phezulu phezulu endaweni eyisisekelo, bakha lokho okubizwa ngokuthi “ishiya weCaldera”, kuvulandi laseSantorini, elinikeza umbono omangalisayo wentaba-mlilo.
Eminye imizana emincane edumile yi-Akrotíri neMéssa Vounó, enezindawo zayo ezidumile zemivubukulo, iPýrgos, Karterádes, Emporió, Ammoúdi, Finikiá, Períssa, Perívolos, Megalohóri, Kamári, Messariá neMonólithos; zizungezwe izivini ezinkulu; amadolobha amhlophe amhlophe agqotshwe izikebhe ezihlwaya ngokubuka okumangalisayo ngale kwe-Aegean. Ukuthola imvelo yendabuko ehlukile yedolobhana kuyisimo esihle kakhulu.
Ukuvakatjhela eSantorini kungokuhlangenwe nakho kokugcina kokubelethisa, njengoba lesi siqhingi siyipharadesi langempela lesimanga. Ziphathe imikhiqizo ethile yendabuko efana ne-cherry utamatisi, izitshalo zamaqanda amhlophe, ifishi, i- “certor” tertí ”, uhlobo olukhethekile lweshizi lezimbuzi olusha olutholakala kulesi siqhingi, noma kungani ungazami ezinye zezithelo ezikhethekile ezikhiqizwe kumagilebhisi atshalwe ku umhlabathi wentaba-mlilo yesiqhingi. I-Assrtiko, i-Athyri, i-Aidani, iMantilaria neMavrotragano ngezinye nje zezinhlobonhlobo zezimpawu ongazinambitha kuma-wineries esiqhingi adumile (ezinye zazo zisebenza njengomnyuziyamu kanye) noma ezindaweni zokudlela.
Yiya emabhishi asentabeni yentaba-mlilo, Venture ungene engcebweni yolwandle yaseSantorini futhi ujabulele amanzi ajule aluhlaza okwesibhakabhaka namabhishi anamhlophe amhlophe, obomvu noma amnyama noma amatshe aqhakaze intaba-mlilo, ukwakheka kwamatshe amahle nokubukeka okumangazayo kwenyanga.
Kunamadolobhana amaningana namadolobhana esiqhingini saseSantorini, amane awo afakwa esiqongweni sentaba ebunjiwe njengesiyingi.
I-Fira - idolobha eliyisisekelo elimangalisa kakhulu, elinakho konke u-Oia anakho, kepha kugcwele kakhulu abantu.
Karterados - 2km eningizimu yeFira. Lapha ungathola izakhiwo zendabuko zeSantorini
IKamari - Ibhishi elimnyama lamatshe. Inemibono emangazayo yeLanga.
I-Firostefani - imizuzu engu-10 nje yokuhamba ibanga ukusuka kwaFira, ihlinzeka ngokubuka okungafani nentaba-mlilo nokushona kwelanga kusuka endaweni okuyo indawo ebekelwa kuyo.
I-Imerovigli - idolobha elincane elisezindaweni ezinamaphiko limi endaweni emfushane ngebhasi eliseduze neFira. Inemibono emangalisa ngokuphelele yokushona kwelanga (yonke indlela eya phansi)
I-Oia noma i-Ia - yokushona kwelanga okungenakulibaleka, mhlawumbe indawo ebabazekayo enhle kunazo zonke kulesi siqhingi.
I-Pyrgos - indawo ephakeme kunazo zonke kulesi siqhingi; Izindela ezimnandi nemigwaqo, zingancintisana ne-Oia.
I-Perissa - Amabhishi amahle, ahlelekile kahle nemigwaqo emihle yezinhlanzi yamaGreek.
I-Megalochori -dolobhana iTraditution elinamasonto amaningi amhlophe ama-cycladic.
I-Akrotiri-Vakashela isigodlo saseVenetian nangaphezulu ngokubuka okumangalisayo umbhoshongo weLa
Umhlangano wokubonisana we-Ponta- Greek Bagpipe-umculo we-Daily!
I-Mesaria - Isizinda sesiqhingi. Kukhona imakethe encane emgwaqweni njalo ekuseni nezinhlanzi ezintsha. Ungaphuthelwa
I-Argiros Estate ukubona indlu ye-19th yakhiwa kabusha ngokuphelele.
IMonolithos- Ibhishi laseNice namathawa ambalwa amahle. Kuhle kakhulu ezinganeni, njengoba amanzi angajulile.
IVlichada - idolobhana nelwandle.
IVothonas - idolobhana ledwala, isonto laseSt. Ann lilapha. Ngokwezakhiwo idolobhana elixakile kulesi siqhingi, njengoba wonke amabhilidi ayenqunywe kusukela ezigodini okulo.
Futhi kuneTirasia, idolobhana esiqhingini esiseduze esinegama elifanayo-elihanjelwe abavakashi abambalwa. Kuhanjwa nsuku zonke esiQhingini saseKameni (intabamlilo) futhi esifinyelela esiqhingini saseTirasia.
Elinye igama leSantorini nguTira. ISantorini futhi yigama lomndeni weziqhingi ezungeze iTira, eke yakha isiqhingi esisodwa ngaphambi komcimbi omkhulu wentaba-mlilo cishe i-1628 BC
Lesi siqhingi esincane sinezindawo eziningi namadolobhana acebile. Vakashela ukwakhiwa kwendabuko edolobhaneni elincane laseMesa Gonia eliqukethe ingxubevange yamanxiwa kusukela ekuzamazameni komhlaba kwe-1956 futhi ubuyisele i-villas kanye ne-winery engaphansi kwendawo. IPyrgos ingelinye idolobhana eliphawuleka elisungulwe ezweni elingaphakathi nezindlu zalo ezindala ezindala, izinsalela zenqaba yaseVenetian namasonto ambalwa aseByzantine.
Lesi siqhingi sinomthombo wemvelo wamanzi amaningi ahlanzekile, isiphethu esincane esisesibayeni ngemuva kwendawo encane esehholo eliphakathi komfula kanye neKira Thira. Le ntwasahlobo inikezela kuphela inani elincane lamanzi; noma kunjalo, isezingeni elihle njengoba iqhamuka ekuphela kwesakhiwo selitrone esiqwini sangaphambi kwentaba-mlilo. Ngaphambi kwama-1990 akuqala, kwakudingeka ukuthi amanzi alethwe esiqhingini nge-tanker evela IKrethe. Manje amahhotela amaningi kanye namakhaya athola ukufinyelela kumanzi anikezwe isitshalo sendawo sokuhlanza. Ngenkathi la manzi esebenziseka, asanosawoti, ngakho izivakashi eziningi ziphuza amanzi asemabhodleleni ngenkathi ziseSantorini.
I-Fira, Santorini 900 izinyawo ngenhla kwe-Old Port.
UFira uyidolobha elivutha amalangabi, umshado wokwakhiwa kwezakhiwo zaseVenetian neCycladic, ezitaladi zalo ezimhlophe ezinamatshe amnyama zigcwele izitolo, amathala, amahhotela nezindawo zokudlela ezinhle zamakhofi, ngenkathi zinamathele emaphethelweni wesigodi ngamamitha ayisishiyagalolunye ngaphezu kwetheku lakhona. Uma ufika olwandle ungathatha ikhebula imoto uphume ethekwini noma uthathe uhambo kwelinye lamakhulu ezinyulu ukhuphuka izinyathelo ze-588 ze-zigzagging. Ungazama nokuthi uhambe ngezitebhisi kepha uxwayiswe, akhona umoya, amancanyana ezingxenyeni ezinezindonga eziphansi kuphela, ambozwe ekugayeni kwezimbongolo futhi izimbongolo ngokwazo ngeke zenze umzamo wokukugwema.
Ukuhamba usuka enyakatho usuka eFira imizuzu engaba ngamashumi amabili kuzokuletha e-Imerovigli, lapho ungathatha khona ukubukwa okuhle kwesimo esihlukile sesiqhingi kusuka edolobheni elincane.
Emaphethelweni asenyakatho yesifunda kukhona idolobha lase-Santia eline-quintessentially i-Oia, liphinde labhalwa nge-Ia futhi labiza i-EE-ah, nezindonga zalo ezigcotshwe mhlophe zashiswa edwaleni lentaba-mlilo kanye namazinyo alo aluhlaza okwesibhakabhaka akhuphuka ngaphezu kobuhle obumangalisayo bomsuka omangalisayo, i-russet Ammoudi Bay. Kusihlwa, idolobha liheha izixuku zabantu abangena bezokwazi ukubona ukushona kwelanga. Ukushiswa kwelanga yiSantorini, njengoba kubukwa kusuka e-Oia, kuthiwa kuphakathi kokuhle kakhulu emhlabeni.
Ngenxa yobuhle bemvelo obuyingqayizivele futhi obuyingqayizivele beSantorini, abaculi abaningi abangamaGreek bakhethe lesi siqhingi njengokuhlelwa kwamavidiyo abo. Uchungechunge lwe-TV lwaseGrikhi nolweBrazil luye lwadutshulwa yiSantorini, kanye namanye ama-movie waseHollywood (isib. Tomb Raider II). Ngokuvamile iSantorini yisigxobo sokuheha osaziwayo abangamaGrikhi nabakwamanye amazwe.
Thola iminyuziyamu ye-archeological neyemibhalo emnandi yaseSantorini:
Imyuziyamu ye-Prehistoric Thera
Imyuziyamu ye-Folkloric Art
Imikhosi yokubaluleka kwamazwe omhlaba yenziwa minyaka yonke, iguqula lesi siqhingi sibe indawo yokuhlangana yabadwebi abavelele.
Okubaluleke kakhulu uMkhosi weJazz ngoJulayi.
Ngo-Agasti, umcimbi obalulekile yi-Ephestia (ngesiNgisi, okuzoba yi: "Volcania") okuwuchungechunge lwemikhosi ehlanganiswe nedili lezicishamlilo elethuka ukuqhuma kwezintaba-mlilo.
ISantorini, izwe elincane kunazo zonke elinentaba-mlilo eMpumalanga yeMeditera, likulindile. Ungayifinyelela ngendiza noma ngomkhumbi. Ungacabangi kabili. Zitholele owakho kanye romance owake waba-in-a-life kanye nalesi sipho sethondo le-Aegean.